Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Na tsy hifankatia aza vita teo ny fifankahalana | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Na tsy hifankatia aza vita teo ny fifankahalana
Tsy rehefa tsy mifankatia dia voatery hifankahala, misy fizarana toy ny fisehon’ny zana-tohatra ny elenelana fitsinjarana ny fifandraisana eo amin’ny fiarahamonina. Malefaka nefa sarotra rovitina ny fihavanana, miainga avy any amin’ny maha mpihavana mitety an’ireo karazana fifankatiavana na finamanana na fisakaizana hatrany amin’ny fifampikasokasohana nohon’ny maha mpifanolo-bodi-rindrina. Afaka heverina fa toy ny olona mifanolo-bodi-rindrina na toy ny mpiray tanàna ny Malagasy rehetra. Iombonana ny tontolo iainana, iombonana ny lalàna mifehy, iombonana ny fizotran’ny ampitso, iraisana ny olona nomena fahefana voafidin’ny maro an’isa nifanekena koa ho malalaka ny fanoherana ao anatin’ny fanajana ny lalàna. Inona indray no mety antony ifankahalana ?
Any ampiandohana ny fametrahana ny filatsahana ho mpifaninana amin’ny fifidianana efa mifono fanambarana fahafantarana ny fitsipika, fanekena ho fifehezan’izany, fahavononana hanaja ny vokatra voangon’ny CENI sy ny fanambarana farany ataon’ny HCC rehefa ao aorianan’ny fandinihany antsakany sy andavany ny tarehimarika sy ny kajy momban’izany sy fanaovany famafakafana mikasika ny fitarainana mety hitranga.
Fitiavan-tanindrazana no ifaninanana, hevitra tsy mitovy no ampiadina, inona no mahatonga fisehon’ny firafesana sy adilahy tsy misy fahamendrehana ? Ao raha ! Alahelon-kanina araky ny fiheveran’ny betsaka. Adi-hevitra tsotra izao moa dia efa mety hitranga ny alahelo, raha fandroson-kevitra momban’ny fitantanana ny raharaha-pirenena no voatsipaky ny safidim-bahoaka tsy maika voa hangidy ny vava ! Izany izy hoe safidim-bahoaka izany anefa no tokony ahitana antony fitonina. Na tsy nifanandrify amin’ny andrasan’ny mponina ny tanjona sy ny tetika naroso, na tsy ampy ny fahaizana nandresy lahatra, na ny olona mihitsy no tsy ankatoavin’ny maro an’isa ! Rehefa izay no niseho, tsy maintsy mionona. Ny voalohan-tenin’ny mpilatsaka rehetra moa dia ny fitiavan-tanindrazana, eo amin’ny fahareseny no tena ahitana an’izany. Ny fahendrena manoloanan’izany dia ny fanetre-tena fa tsy ny fizirizirina amin’ny fanilihana fahadisona any amin’ny sasany na any amin’ny zavatra hafa. Ny halatralatra na madinika na vaventy, tsy misy izay tsy azon’ny fakapanahy raha afaka manao an’izany, tsy mila mitady lavitra fa ny tena no tsaraina voalohany mikasika an’io fanotana io. Fitetezana petsapetsa toy izany ny sehatra nifaninanana hatramin’izay, izay tafita voalohany ihany no hany izy. Fampiononana ho an’ny resy ny fanetsana be mbola ho avy. Ho azy ireo ny fitsinjovana ny tsy fitranga-na korontana no fitsipika voalohany amin’ny fahaizana mampiray fitiavan-tanindrazana sy hetsika fanoherana.